တင်ဒါခေါ်ယူမှု - မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်ကတ်ကြေးများအတွက်အလင်းရောင်တပ်ဆင်ခြင်း (Dinar Station, Sandikli Station နှင့် Ekinova station) | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာလေလံပွဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလင်းရောင်တိုင်၏ installation ၏ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်မီးအိမ်ရမှတ် (Dinar Gara Gara သေတ္တာများနှင့် Ekinova ဘူတာဧရိယာ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလင်းရောင်တိုင်၏ installation ၏ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်မီးအိမ်ရမှတ် (Dinar Gara Gara သေတ္တာများနှင့် Ekinova ဘူတာဧရိယာ)
27 / 08 / 2013 လေလံပွဲ, အထွေထွေ, Institute, ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်, တူရကီ, TCDD, တည်ဆောက်နေလေလံ
Dinara Gara Gara သေတ္တာများနှင့်အလင်းရောင် installation ကိုပရိုဂျက်တာထမ်းဘိုးနှင့်မီးအိမ်ကတ်ကြေး၏ Ekinova ဘူတာခိုင်ခိုင်လုံလုံပြုပြင်မွမ်းမံ
TCDD7။ တစ်ဝိုက်ပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေး
Dinara ဘူတာ, သေတ္တာများနှင့် Ekinova ဘူတာရထားဘူတာဧရိယာအလင်းရောင်ထမ်းဘိုးများ၏ပရိုဂျက်တာ installation ကိုအညီပွင့်လင်းနူးညံ့သောအားဖြင့်ချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်မီးအိမ်ကတ်ကြေးပြင်ဆင်ပေးခြင်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 4734 19 အမှတ်အပိုဒ်ပါလိမ့်မည်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 114398
က) လိပ်စာ: Ali ÇETINKAYA mAh ။ STATION ကို CAD ။ NO: KAT 6:2AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2722137621-388 - 2722144729
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxtasinmazihale@tcdd.gov.t
ဂ) အစအဦးအလုပ်လုပ်: အ5ကာလ၌စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့် နေ့မှစ.
က) Place: TCDD 7.BÖLGသင်တန်းနှင့် meeting room / AFYONKARAHİSAR
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 04.09.2013 - 10: 00
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - Kocatepe ဘူတာရုံနှင့်Sandıklı Ekinova နှင့် Burdur da
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - Pınarbaşı Station makas
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: projector ကို (ဗန်နှင့်Kapıköy) အဖြစ်ပြောင်းလဲခံရဖို့ LED ပရိုဂျက်၏ရောဂါလယ်ပြင်
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း - အလင်းရောင် - installationankırı Scissors Factory သို့လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သလဲသီးဟာဘူတာ Yard အတွက်ပရိုဂျက်တာကရိယာ Led Hale ကကူးပြောင်း
တင်ဒါကြေငြာချက် - Larl ale နှင့်အတူNarlıဘူတာရုံရှိ Projector Luminaires
တင်ဒါကြေငြာချက် - အလင်းရောင်တိုင်များ၊ AG-OG နှင့်အားနည်းနေသောတပ်ဆင်မှုများ…
တင်ဒါကြေငြာချက် - Spot Welded Peronbej ဆောက်လုပ်ရေး Elh နှင့်အတူElmadağဘူတာရုံတည်နေရာ
မီးရိုးစွန်းဒေသများမှ, သင်္ဘော MV နှင့်လိုအပ်သော LV-Away, အားနည်းလက်ရှိထည့်သွင်းတင်ဒါရလဒ်ကိုတွေ့မြင်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Incirlik လေတပ်စခန်း Loading ၏ Elucidation နှင့်ချဧရိယာ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများဖြတ် Twisted နှင့်အလုပ်သမားရေးရာ (TÜLOMSAŞ) Locomotives